Imisebenzi efunekayo yesizukulwana esitsha
Ewe, siya kushayisana ne-coaching kwi-mobbing, ukuphulaphula iingxoxo zabasebenzi baseofisi-kwaye, kubonakala ngathi, baye kubafokazi. Ewe, ngandlela-thile bajwayele ukuba igama elinoyiko elithi "ukumkela" lithetha kuphela igumbi lokulinda, kwaye "umthengisi" ongenakuthengiswayo "uhlalutyo" ulungisa izinto kwiitrhebhe zesitolo esinexabiso elinjalo elinengqiqo lokuba bathengiswa kangcono. Kodwa ngamanye amaxesha, ekhangela izivakalisi malunga nezikhundla, susa isifuba esibandayo: utata, abo bonke bafuna!
Yintoni enokuyenza i-akhawunti elula apha? Okwangoku, ngokwempawu eyaziwayo, nokuba usosayensi ongenakukwazi ukuchazela intsingiselo yakhe yengqondo kumntwana ungowesi-charlatan. Ngokuqhelekileyo, unokwazi ukubonisa ubungundoqo bemigqaliselo elula kumagama alula. Imisebenzi efunekayo yesizukulwana esitsha inokuthiwa ngokukodwa abo bachazwa banomdla kakhulu.
Ubungcali bokusebenza, okanye ukukhwabanisa
Yintoni. Oku kuyimfuneko efunekayo yesizukulwana esitsha, kuba kunye nemveliso enhle kakhulu inokuletha imali encinci ukuba kuthatha ixesha elide ukuba lincinci kwiindawo zokugcina impahla, ihlawulwe ngamasiko, ithuthwe ngumqhubi ongenamdla ixesha elide kunye nelahleko. Ukongezelela, ezininzi iimveliso zangezinga elifanayo zinama-propati efanayo, ukuze ufike phambili, kufuneka ugcine kuyo yonke into encinane. Apha, kwaye uthabatha umsebenzi wezinto zokungenisa izinto - uncedo olubi. Umele alawule ukuhamba kwezinto ezibizwa ngokuba "ukuhamba kwempahla" kuzo zonke izigaba. Ukubala onke amanyathelo njengoko uhamba e chess. Hlela zonke iinkqubo ngendlela enjengokugcina ixesha elininzi, isikhala, izixhobo ... Kwezinye iinkampani, umzekelo, zinzima ukuqinisekisa ukuba umkhiqizo uyenza ngaphandle kokuhlala kwindawo yokugcina impahla kwaye ulondoloze imali eninzi. Imithwalo eyimfuneko. Indoda efanelekileyo yokukwazi ukuseka ubudlelwane obuhle kunye nayo yonke into ingaba ngumntu wesibini kwinkampani. Okokuqala, kufuneka ukuba akwazi ukucinga ngokucwangcisekileyo. Yaye imfundo eyisiseko yobugcisa ukuqonda ubunzulu beenkqubo zokuvelisa - kunye nokukwazi ngokwengqondo ukuxoxisana nabantu.
Umqhubi womsebenzi, okanye umakhi wekamva
Yintoni. Ukuba ngokucacileyo - yakha indlu. Okanye indawo yokuhlala. Okanye into enye incedo. Ayikho i-tskomkom, kunjalo, kunye nobuchopho. Uyalela iprojekthi, uthenga umhlaba (okanye uqeshisa), uqeshe abasebenzi kunye nokulawula ukwakhiwa kwesibonelelo. Emva koko unokuyithengisa, ukuyiqashisela kwiiofisi okanye ukulungelelanisa "endleleni", into ephambili kukuba iindleko zihlawulelwa kwaye iphrojekthi izisa inzuzo. Ukuthetha ngokuthe ngqo, lo msebenzi awuyiyo umsebenzi oqashiweyo, kwiintengiso "umqhubi uyafuneka" kuthetha, kodwa kunoko, umphathi weprojekthi. Umthuthukisi kwimiqathango eqinileyo yegama - umqeshi ngokwakhe, uthabathe iqela aze anike imisebenzi yakhe. Imithwalo eyimfuneko. Abaphuhlisi baqala ukujongana nalabo baphumelele kuyo nayiphi na icandelo leshishini. Kwaye bafuna ukuzizama kumsebenzi onzima wokudala. Ngokuqhelekileyo, oku kufuna ulwazi olunzulu lwezemali nolwezomthetho, ulwalamano olusondeleyo nemeko kwiimakethe zendawo yokuhlala, nolwazi olubanzi kwintsimi yokwakha.
Umqhubi-ntloko, okanye umzingeli
Yintoni. Kubonakala ngathi wonke umntu ufuna umsebenzi. Nangona kunjalo, ubugcisa obuyimfuneko obuqhelekileyo besizukulwana esitsha singabalwa kwiminwe. Ngokwemvelo, umqeshi uphakamisa umbuzo: njani umntu unokufumana "isakhelo" esinjalo? Lo ngumsebenzi womqhubi-ntloko, igosa labasebenzi, i-liner-two to hunt for individual, iibonelelo ezibalulekileyo. Izindlela zabazingeli abanjalo zihluke kakhulu. Imithwalo eyimfuneko. Okulungileyo (kuhle, kuhle kakhulu) ukukwazi ukuqonda abantu kunye nokufumana indlela kubo. Ulwazi lweemarike zabasebenzi. Kwaye ngokuqinisekileyo - ubukho bentlaba! Ukuhamba. Ukusuka kwigama elithi "isihlwele". Yilapho abasebenzi ngabanye behlaselwa kwaye bahlukunyezwa. Ukuthetha ngokukhawuleza, ukukhangela emsebenzini. Coaching. Ukusuka kwigama elithi "umqeqeshi". Kodwa umsebenzi apha awukho kunye nenkqubo, kodwa ngumntu ohlukeneyo.
Ungayifumana njani amandla okutshintsha umsebenzi wakho onqatshiwe?
Indlela yokufumana umphathi kumphathi
Ngaba umfazi kufuneka asebenze
Umgaqo weemithetho xa uthetha nenkosi
I-pie nama-walnuts nama-apricot
Isibikezelo seenkwenkwezi ngeenkwenkwezi zesibonakaliso se-2010
Ngaphantsi kwesiphi isibonakaliso se-zodiac bazalwe ngamadoda nabafazi abalungileyo
Siyaziqhelisela umntwana kwisitya esitsha
Ukubonakala ngokukhawuleza kuka-Ani Lorak eKiev kwacaphukisa i-patriots yase-Ukraine
Indawo yokusebenza ekhitshini: iingcebiso ezininzi malunga nokuyila kwayo
Compote of watermelon
Isobho seTatato kunye nenkukhu inyama yezilwanyana ebhodweni kunye